Talyaaniga Oo Ku Guuleeystay Koobkoodii Ugu Horreeyay Muddo 53 Sanno Ah Iyo Nasiibdarradii Qabsatay Ingiriiska | Warbixin+Sawirro – Garsoore Sports
Talyaaniga Oo Ku…
Habeen ay ka buuxaan xiisad iyo rajo, Talyaanigu wuxuu hantay horyaalkiisii ugu horreeyay ee ugu weynaa muddo 53 sanno ah markii rigoorayaal uu uga adkaaday Ingiriiska finalkii Euro 2020 ee ka dhacay garoonka Wembley ee magaaladda London.
Ciyaartoyda Talyaaniga ayaa ku debaaldegaya koobka kaddib markii ay ku guuleysteen Euro 2020
Siddeey wax u dhaceen | 90ka daqiiqo
Goolkii uu dhaliyay Luke Shaw daqiiqadii 22-aad ee ciyaarta ayaa hoggaanka u dhiibay Ingiriiska oo u muuqatay mid ilaashaneysa goosheeda habeenka oo dhan, kahor inta aanan shabaqa lagasoo taaban bartamihii qeybtii labaad ee cayaarta taasoo u ogolaatay Leonardo Bonucci inuu dhaliyo goolka barbarraha ee Xulka Talyaaniga.
Wakhtiga dheeriga & rigooreyaasha
Intaa kaddib, cayaartu waxay u muuqatay mid waqti dheeri ah loo baahan doono iyo xitaa rigoorayaal oo siddaasi bay noqotay dhammaadkii, maadaama labada dhinac midkoodna uusan u muuqan inuu diyaar u yahay ama uu heysto awood uu ku muujiyo geesinimo ku filan inuu sameeyo weeraro joogto ah oo si joogto loogu dhibaateeyo daafacyada kooxda kale si shabaqa loosoo taabto mar kale.
Ingiriiska ayaa seegtay seddex kamid ah shantii rigoore, Marcus Rashford ayaa birta garaacay halka Gianluigi Donnarumma uu beeniyay laadkii Jadon Sancho kahor inta aan da’ yarka Arsenal ee Bukayo Saka loo dhiibin rigooraddii go’aaminta taasoo uu arkay inuu ka badbaadiyay goolhayaha abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan tartanka ku guuleeystay ee Gianluigi Donnarumma.
Harry Kane iyo Harry Maguire ayaa bartilmaameed keliya ayaa 5 rigoore u dhaliyay Ingiriiska halka goolhaye Pickford uu sii nooleeyay rajadda xulkiisa isagoo badbaadiyay laadadkii Andrea Belotti iyo Jorginho halka Domenico Berardi, Bonucci iyo Federico Bernardeschi ay shabaqa usoo taabteen Talyaaniga.
Saka oo ilmeynaya, ayaa muujiyay karti uu ku laado laadkii ugu dambeeyay ee cayaarta, ayaa waxaa u tacsiyeeyay asxaabtiisa xulka Ingiriiska iyo Tababare Gareth Southgate laakiin ma jirin qalbi qaboojin dhab ah oo iyaga uu ka heli karo ama taageerayaasha saddexda libaax ee soo buux dhaafiyay garoonka Wembley.
Xulka Ingiriiska ayaa guud ahaan kulanka waxaa ka muuqday inay yihiin kuwo daafac ku jira oo aanan mararka qaar xitaa soo dhaafeeynin qeybtooda garoonka iskabadaa inay fursaddo goolal ah u abuuraan weeraryahanadda kooxda oo uu hoggaaminayo kabtan Harry Kane kaasoo kamid ahaa cayaartooydii ugu taabashada yareyd kulanka.
Talyaaniga oo isna sidoo kale soo bandhigay xeelad daafac oo heer sarre ah inkastoo ay ka fursaddo abuur badnaayeen Ingiriiska ayaa dhismaha qaab daafaceedkooda 4ta dambe ay injineero ka ahaayeen kabtan Georginio Chiellini iyo Leonardo Bonnuci kuwaasoo wadarta da’doodu ay tahay 70 sanno.
Ingiriiska ayaa la kulantay nasiibdarrooyin badan oo dhanka rigooreyaasha sannadihii la soo dhaafay iyadoo guuldarreeysatay rigoorayaasha ugu badan (4) marka loo fiiriyo wadamada kale taariikhda koobka qaramada Yurub.
Taageerayaasha Saddexda libaax ayaa caan ka dhigtay hal ku dhiga “Its coming home” oo la micna ah ‘Wuxuu imanayaa guriga” balse intii lagu guda jiray dabaaldegii duurjoogta ee Talyaaniga, daafac Leonardo Bonucci – oo kulanka si heer sarre ah u cayaaray dhaliyayna goolka barbarraha ee xulkiisa – ayaa wuxuu ku qeylinayay “Wuxuu imanayaa Roma” si uu cusbo kale usii mariyo dhaawacyada taageerayaasha Ingiriiska.
Guuldaradii Ingiriiska soo gaaray kulankan ayaa si qoto dheer loo dareemi doonaa kaddib horumarkii cajiibka ahaa ee ay kagasoo gudbeen wareeggyadda bug-baxa iyo guulihii ay ka gaareen Jarmalka, Ukraine iyo Denmark.
Talyaaniga oo haatan sii dheereeystay rikoorkoodii guuldarro la’aanta oo noqoneysa 34 kulan oo xiriir ah ayay guushani qabiirrada u arkaan inay xiiso u yeeleeyso koobka adduunka ee 2022ka Qatar lagu qabanayo maadaama Talyaanigii laga baqi jiray uu kusoo laabtay heerka ugu sarreeya kubbada-cagta caalamiga ah.